Health Sarokar | यस कारण थपियो रोटा विरुद्धको खोप
नेपाल सरकारले हालसालै रोटा खोप राष्ट्रिय खोप-तालिकामा समावेश गरेको छ। यो खोपको पहिलो मात्रा छ हप्ताको उमेरमा शिशुलाई दिने तयारी छ । त्यसै गरी दश हप्ताका शिशुलाई यसको दोस्रो मात्रा दिने खोप-तालिकामा उल्लेख छ। यो खोप थपे सँगै अब नेपाल सरकारले १५ महिना मुनिका बालबालिकालाई लगाउने खोपको सङ्ख्या बाह्र पुगेको छ।
नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र थपेको यो खोप के का लागि हो? यो खोप दिनुका फाइदा के हुन् ? जस्ता कुरा जान्नका लागि हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जकी बाल रोग विशेषज्ञ उप प्राध्यापक डा. प्रविना श्रेष्ठ सँग कुरा गर्‍यौ। प्रस्तुत छ, यस खोपका बारेमा उहाँसँग हेल्थ सरोकारले गरेको कुराकानी:
यो रोटा खोप भनेको के हो ? किन लगाइन्छ ?
रोटा खोप भनेको २ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै देखिने गरेको झाडापखाला विरुद्धको खोप हो। संसार भरी नै ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा झाडापखालाका कारण मृत्यु गराउने प्रमुख कारक रोटा भाइरस मानिन्छ। यस जीवाणुले गर्दा लाग्ने झाडापखाला नेपालमा पनि व्यापक रूपमा छ। नेपालमा बालबालिकामा देखिने झाडापखालामा करिब एक तिहाइ रोटा भाइरसले गर्दा लाग्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैले नेपाल सरकारले अहिले यो जीवाणु विरुद्धको खोप राष्ट्रिय खोप-तालिकामा समावेश गरेको हो।
रोटा भाइरसले कस्तो प्रकारको रोग लाग्ने गर्दछ ?
रोटा भाइरसले सङ्क्रमण गरेको ४८ घण्टामा यसको लक्षण देखिन थाल्छ। सुरु सुरुमा बान्ता हुनु अनि पछि गएर पानी जस्तो पखाला लाग्नु यसका प्रमुख लक्षणहरू हुन्। रोटा भाइरसले लाग्ने पखालामा शरीरबाट पानी धेरै मात्रामा बाहिरिने हुँदा बिरामीमा रुँदा आँसु नआउने, पिसाब कम लाग्ने, मुख तथा घाँटी सुक्ने, ज्वरो आउने हुन्छ। यी लक्षणहरू तिन दिन देखि एक हप्तासम्म पनि देखा पर्न सक्दछन्।
के यो झाडापखाला गम्भीर हुन्छ?
रोटा भाइरसले धेरै नै हानी गर्न सक्दछ। माथि भने जस्तै यसले झाडापखाला, ज्वरो र बिरामीको शरीरमा जलबियोजन (डिहाइड्रेशन) गराइदिन्छ। त्यसैले स-साना बालबालिकामा यो झाडापखाला गम्भीर मानिन्छ। बालबालिकाहरूले उक्त सङ्क्रमण लाग्दा खाना खान र पिउन कम गर्ने कारणले गर्दा पनि कति बालबालिकालाई आई. भि. औषधि दिनु पर्ने हुन सक्छ।
कस्ता बच्चामा यो सङ्क्रमण बढी देखिन्छ ?
आमाको दुधमात्र खाने गरेका बच्चाहरूमा यो सङ्क्रमण लाग्ने जोखिम अलि कम हुन्छ। यसको जोखिम छ महिना देखि २ वर्ष सम्मका बच्चाहरूमा बढी हुन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम क्रमशः कम हुँदै जान्छ। यस सङ्क्रमणले ५ वर्षसम्मका बच्चाहरूमा पनि झाडापखाला लाग्न सक्दछ। हुन त यो सङ्क्रमण ठुला मानिसलाई पनि लाग्न सक्दछ तर वयस्क मानिसहरूमा पखाला लागे तापनि जोखिम कम हुन्छ। अनि फेरी वृद्धहरूलाई पनि यो सङ्क्रमणले गाह्रो पार्न सक्दछ।
यो जीवाणु कसरी सर्दछ?
बिरामीको दिसामा यो जीवाणु भेटिन्छ। यदि त्यो जीवाणु केही गरी कसैको मुखमा जान्छ भने सो मानिसमा सङ्क्रमण सर्दछ। यो जीवाणु दूषित खाना तथा पानीमा हुन सक्दछ। तपाईँले केही समान छुँदा सो जीवाणु तपाईँको हातमा आउँछ र यदि सफासँग हात नधोई मुखमा हालियो भने शरीरमा सङ्क्रमण फैलन्छ । बच्चाहरूमा मुखमा हात हालिरहने बानीले गर्दा पनि यो जीवाणु सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। फेरी यो जीवाणु मानिसको शरीर बाहिर पनि धेरै दिन सम्म बाच्ने कारणले बढी सर्ने हुन्छ। त्यसैले नै यो खोपको महत्त्व बढी छ।
बच्चाहरूलाई सङ्क्रमण हुन बाट कसरी जोगाउन सकिन्छ?
माथि भने जस्तै बिरामीको दिसामा यो जीवाणु भेटिन्छ। त्यसैले सङ्क्रमण हुन बाट जोगाउन दिसा सफा सँग धुने,फोहर डाएपरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, दिसा लागेका लता कपडा तथा अन्य बस्तुहरू पनि राम्रो सँग सफा गर्ने, साबुन पानीले हात धुने बानी बसाल्नु पर्दछ।
यसले के गर्मी मौसममा सङ्क्रमण गर्ने हो?
होइन। यो अरू झाडापखाला जस्तो गर्मी मौसम र पानी पर्ने मौसममा मात्र देखिने रोग होइन। यसले वर्षै भरि सङ्क्रमण गर्न सक्दछ, अझ जाडो मौसममा यसको सङ्क्रमण बढी हुनाले यसबाट लाग्ने झाडापखालालाई अङ्ग्रेजीमा "कोल्ड डायर्र्हिया" पनि भनिन्छ।
रोटा भाइरसले सङ्क्रमण गरिहालेको अवस्थामा के गर्ने ?
रोटा भाइरसले गर्दा लाग्ने झाडापखालामा याद राख्नु पर्ने कुरा भनेको बच्चाको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिन पर्याप्त मात्रामा पानी, दूध तथा झोल खाने कुरा खुवाउनु पर्दछ। अनि साथसाथै बच्चालाई पुनर्जलिय झोल (जीवनजल - ORS) तारन्तार रूपमा खुवाउनु पर्दछ, हरेक चोटि दिसा गरेपछि खुवाउन सकेमा बच्चालाई धेरै गाह्रो हुँदैन। यसको लागि कुनै छुट्टै औषधि भने छैन। त्यसैले पनि यो खोपको महत्त्व बढी छ। पुनर्जलिय विधि -ORS बनाउँदा याद गर्नु पर्ने कुरा क हो भने १ प्याकेट ORS उमालेर सेलाएको १ लिटर पानीमा घोल्नु पर्दछ र २४ घण्टा भित्र सेवन गर्नु पर्दछ, बच्चा सानो छ धेरै खाँदैन भनेर थोरै मात्र बनाउन खोज्दा हुने दोषपूर्ण तयारीले गर्दा सो पुनर्जलिय विधिले उचित काम गर्न सक्दैन। थोरै पानीमा धेरै ORSको धुलो मिसाएर बनाइएको पुनर्जलिय विधिले उल्टै शरीरलाई हानि गरेको अवस्था पनि हामीले धेरै देखेका छौ, त्यसैले त्यस्ता गल्ती नगर्न सजग हुनु आवश्यक छ। ORS नै नभएको खण्डमा नुन चिनी पानी भए पनि प्रशस्त मात्रामा खुवाउनु पर्दछ। बच्चा सारै गलेमा, केही पनि खान पिउन नसक्ने भएमा, खाएको कुरा केही पनि शरीरमा नअडिएमा, ज्वरो धेरै आएमा तुरुन्त अस्पताल लग्नु जरुरी हुन्छ।
डा. प्रविना श्रेष्ठ
उप प्राध्यापक, बाल रोग विशेषज्ञ